सरकार गठनमा केन्द्रपछि चासोका साथ हेरिएको प्रदेश नं. २ मा कसले मार्ला बाजी -
सरकार गठनमा केन्द्रपछि चासोका साथ हेरिएको प्रदेश नं. २ मा कसले मार्ला बाजी
२६ माघ २०७४, शुक्रबार १२:५४ 1029 पटक हेरिएको
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ को सरकार गठनको विषयलाई आम रुपले चासोको विषय मानेर हेरिएको छ । यो प्रदेशमा कुनैपनि पार्टीको पूर्ण बहुमत नभएको तर फोरम र राजपाको गठबन्धनको महुमत रहेको छ ।
यी दुई गठबन्धन चुवानमा पनि सहकार्य गरेका थिए । चुनावपछि पनि सहमतिय सरकार गठन भन्दा आफूहरु बाहिर नरहेको जनाइरहेका छन् । तर आ–आपनो पार्टीले सरकारको नेतृत्वको दाबी भने गरीरहेका छन् । यो व्यक्ति आकांक्षाबाट बढी प्रभावित रहेको यहाँका नेताहरुले बताई रहेका छन् । केही दिन अगाडि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले पुर्व सहमति अनुसार नै सरकार बनाउने बताएका थिए भने फोरम नेपालका अध्यक्षलेपनि सहमति अनुसार जानेमा दुबिदा नरहेको बताएका थिए ।
त्यसो भए किन सहमतिमा पग्न सकेको छैनन् त यी दुई पार्टी